Ndị na -emepụta ihe na ndị na -eweta ya Chain Hub Sprocket | Pingtai
Ike ọkọnọ: 10000 PCS/ọnwa
Oge nzipu: 7-30 ụbọchị
Chain Hub na -amịpụta atụmatụ ya
Ihe na -anya ụgbọ ala bụ moto na -ejegharị ejegharị, usoro mbibi na -agagharị agagharị na sprocket. Nrụgide hydraulic sitere na mgbapụta kwụụrụ onwe nwere ike ịgbaghari site na moto na -eje ije wee mebie ya site na usoro mbata ụkwụ na -aga ije. Ebe a na -adọba ụgbọala dị n'ihu na n'azụ ụgbọ ahụ iji na -anya ụgbọ okporo ígwè.
Usoro mmepụta site na ịgbanyụ ọkachamara na usoro iwe ọkụ, iji hụ na arụ ọrụ igwe dị mma, ike dị elu na nkwụsi ike gbagọrọ agbagọ, iguzogide mgbaji ọkpụkpụ na iyi ihe.
* Nabata ebe nrụpụta ihe dị elu na larịị CNC kwụ ọtọ iji mezuo ihe achọrọ.
* Njikwa njikwa siri ike, site na akụrụngwa ruo na nkwakọ ngwaahịa.
* Isi ike HRC50-60, na-ebelata ike na akwa, na-agbatị ndụ ọrụ, yana gbakwunye ngwaahịa gị site na ịbawanye ogologo ngwaahịa. A na -eji okporo osisi etinyere na shei ahụ na -akwagharị okporo ígwè iji ghọta ije onye na -egwupụta ihe. Ogwe oghere agbụ ígwè bụ wiil nwere ọdịdị pụrụ iche
Kedu ka Chain Hub Sprocket na Drive Wheel Motor si arụ ọrụ
Ụgbọ ịkwọ ụgbọala: Ụgbọ ala na -anya n'azụ nke etiti X. A na -eji wiil na -anya ụgbọ ala enwe moto na -eje ije, usoro mbata ụkwụ na -agbagharị agbagharị na oghere oghere Chain .Nrụgide hydraulic sitere na mgbapụta kwụụrụ onwe ya nwere ike gbanwee ya site na moto na -eje ije, nke usoro aghụghọ na -agagharị agagharị na -agbada. Mgbe ahụ, mgbanaka gia nke etinyere na shei na -eduga okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè iji ghọta ije nke onye na -egwupụta ihe.
Otu akụkụ nke wiil ịnya ụgbọ ala ga -anọrịrị n'azụ, n'ihi na a na -akwụnye ya ozugbo na etiti X na -enweghị ọrụ ịmịkọrọ ujo. Ọ bụrụ na igwe na -anya ụgbọ ala na -aga n'ihu, ọ bụghị naanị na ọ ga -eyi ihe na -adịghị ahụkebe na mgbanaka mgbanaka na ụgbọ okporo ígwè, kamakwa ọ nwere mmetụta ọjọọ na etiti X, nke nwere ike nwee mgbawa na nsogbu ndị ọzọ. Onye na -echebe moto iji chekwaa moto na oghere dị n'ime ya nwere ike ịchekwa unyi na ajịrịja, ọ ga -emerụ ahụ na -aga n'okporo ụzọ mmanụ ụgbọ ala, iru mmiri dị n'ime ala ga -emebi nsị, gravel nkwonkwo ga -etinye aka na nnyonye anya nke ịwụ tubing kpatara. ihihi, yabụ mepee efere nche mgbe niile na -ehicha unyi n'ime. Mgbe ị na -anọchi mmanụ nnyefe ikpeazụ, a ga -adọba ihe na -egwupụta ihe na ala dị larịị, wee nyefee nnyefe ikpeazụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na -agbapụta mmanụ na ala ma dabere na ala. Mgbe ị na -agba mmanụ, mee ka ihe nkedo nke na -agbapụta mmanụ sikwuo ike, si n'elu ọdụ ụgbọ mmiri na -agbanye mmanụ, mmanụ nwere ike ịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri nlegharị anya n'etiti.
Isi akụkụ nke nwụnye
Chain hub na -ewepụta nkọwa zuru ezu
Nkọwa: Chain hub sprocket forging / casting heavy duty
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 PCS/ọnwa
Usoro: Nkedo/ibe ya
Ekweghị ekwe: HRC50-52
Ogo: arụ ọrụ ngwuputa ihe dị arọ
Nke gara aga: Sochie Mgbakọ Cylinder Adjuster
Osote: Ọnụahịa kacha ala dị ala China ANSI/DIN/JIS Standard Non-Standard Transmission Parts Conveyor Motorcycle Roller Wheel Plate Set CD 70 Igwe anaghị agba nchara C45 Carbon Industrial Gear Chain Sprocket
agbụ na -agbagharị agbagharị na -apụta
ígwè ogwe yinye wheel
wheel na sprocket
D10 IDLER GP-TRACK 9W9734-katapila
D11 Track ala nzukọ abụọ Flange 9976194 ...
Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Ike kpọchie, Bit ejedebela ugboro abụọ, Iburu Track ala, Ndị na -agba egwu Rubber Track, Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ,